प्रहरीलाई मुक्का हानेको भिडियो भाइरल, को हुन् प्रहरीलाई कुट्ने युवा ? — Imandarmedia.com
प्रहरीलाई मुक्का हानेको भिडियो भाइरल, को हुन् प्रहरीलाई कुट्ने युवा ?
काठमाडौ। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई मुक्का हानेको भिडियो भाइरल भएको छ । सडकमा रोकिराखेको प्रहरीको गाडीभित्र बसेका प्रहरीलाई नै एक हुल युवाले मुखमा मुक्का हानेको देखिन्छ। ८/९ जनाको समूहमा रहेका युवाले ती प्रहरीको मास्क खोल्नेदेखि मुक्काले समेत हान्छन्।
सार्वजनिक भएको ४ मिनेट २७ सेकेन्ड लामो उक्त भिडियोमा फिल्डमा खटिएका कमाण्डर भने युवा जमातलाई रोक्ने प्रयास गर्छन्। यति गर्दा समेत उनीहरुले प्रहरीलाई टेर्दैनन्। ठेलमठेल गर्दै गाडीभित्र बसेका प्रहरीलाई मुक्का हान्छन्।
‘ठूला कुरा गर्ने ? फोटो खिच्ने ?’ भन्दै प्रहरीलाई उनीहरुले कपाल तान्नेदेखि, मुखमा लगाएको मास्क खोलेर मुक्का हानेको भिडियोमा देखिन्छ। कुटपिट गरिसकेपछि केही पर गएका उनीहरु फेरि फर्केर आएर प्रहरीमाथि कुटपिट गर्छन्।
यति हुँदासम्म फिल्ड कमाण्डर भने ती युवाको जमातलाई सम्झाउन मात्रै खोज्छन्। युवाको जमातले ड्युटीमा रहेको प्रहरीलाई मुक्का हान्दा समेत प्रहरी निरिह भएको भिडियोमा देखिन्छ।
‘सिपाही भएर बढ्ता हुने’ भन्दै उनीहरुले प्रहरीलाई फर्कि–फर्की कुटपिट गरेको देखिन्छ। त्यसको केही समयमा प्रहरीको थप टोली पनि घटनास्थल आइपुग्छ। उनीहरु पनि ती युवाको जमात अघि निरिह भएको देखिन्छ।
उनीहरुले ‘तेरो एआइजी हरि पाललाई बोला’ समेत भनेको भिडियोमा सुनिन्छ । उनीहरुले ‘एउटा सिपाहीलाई सम्झाउन सक्दैन ? हरि पाललाई बोला’ भनेर प्रहरीलाई धम्की दिन्छन्।
यसबारे हामीले जिज्ञासा राख्दा उक्त घटना भदौ ११ गतेको भएको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहले उक्त घटना भदौ ११ गते रातिको न्यूरोडस्थित पिपुल्स प्लाजा अगाडिको भन्ने जानकारी आएको बताए।
ड्युटीमा रहेको प्रहरीमाथि त्यसरी मुक्का हान्ने समूहको खोजी भइरहेको र उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने एसएसपी सिंहले बताए। ‘मुक्का हान्ने समूह जो भएपनि उनीहरु कारबाहीको दायरामा आउँछन्। उनीहरुको खोजी भइरहेको छ’, एसएसपी सिंहले भने।
उता काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा एआइजी हरि पालले पनि युवाहरुको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई निर्देशन दिइसकेको बताए।
उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वडीआईजी पूर्णचन्द्र जोशीले प्रहरीमाथि हातपात गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनी भन्छन्, ‘प्रहरी आफैंले कुनै गल्ती गर्नु हुँदैन। आफू सहि हुँदाहुँदै कसैले अति गर्छ भने त्यस्तालाई नियम सिकाउनु पर्छ।
छिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनको दुरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले दूत पठाएर सम्वाद प्रारम्भ गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरु प्रतिपक्षी नेता ओलीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका देउवाले सम्बन्ध सुदृढ बनाउन खोजेका हुन् ।
यो पनि : प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच भयो यस्तो बोल्ड सहमति, अब के गर्लान् प्रचण्ड र माधव नेपाल ?
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले पूर्णरुपमा सघाएका थिए । अहिले पनि आफूहरु मिलेर जानुपर्ने सन्देश देउवाले ओलीलाई पठाएका छन् । देउवाको दूत बनेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मंगलवार राती बालकोट पुगेका थिए । बालकोटमा ओलीसँग दुई घण्टा बढी कुराकानी भएको ओली निकट एक नेताले जानकारी दिए ।
भेटमा सरकारलाई सघाउन देउवाका तर्फबाट कार्कीले ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । देउवाले सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरुबाटै आफू चेपुवामा परेको भन्दै मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीले भने सुरुमा आफ्नो दल विभाजन गरेको, माधव नेपालहरुको कारवाही सभामुखले रोकेको, अध्यादेश ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । तर अन्तिममा मिलेर जान कन्भिन्स भएको स्रोतको दाबी छ ।
संसद् सञ्चालन तथा एमसीसीबारे निर्णय लिने सम्बन्धमा देउवाले ओलीसँग सम्वाद थालेका हुन् । त्यसैगरी ओलीले ल्याएका अध्यादेशहरुबारे निर्णय लिन पनि संसदमा ओलीको सहयोग आवश्यक छ ।
देउवाले ओलीसँग पुरानै मित्रता दोहोरयाउन थालेपछि सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र माधव नेपालहहरु शशंकित बनेका छन् । उनीहरुले फेरि ओली र देउवा मिलेर केही गरिहाल्छन् भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
देउवाका दूतले ओलीभन्दा अगाडि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भेट गरेका थिए । ‘प्रतिपक्षसँग सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गर्न कानुन मन्त्रीज्यू मेरो कार्यकक्षमा आउनु भएको थियो । साँझ पार्टी अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्नु भयो,’ नेम्वाङले भने, ‘सरकार र प्रतिपक्ष दलबीचका सबन्ध कसरी मजबुत बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भयो ।